ကိုဗစ် ပေါ့စတစ် လူနာ ကို လူနာ စောင့်ခွင့် လိုက်ပါ နိုင်ရန် သတ်မှတ် ထားသော စည်းကမ်း ချက် များ (ရှယ်ထားပေး ပါအုံး ..) – Cele Posts
ကျွန်တော် ကို ကိုဗစ် Positive လူနာစောင့် လိုက်ချင်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လာမေးကြတာတွေရှိ ပါတယ်။ အရင်ကတော့ လိုက်လို့မရဘူး လို့ပဲ သိထားပင်မဲ့ အခု ကိုဗစ် နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖြေကြားပေး နေတဲ့ HICA ဆိုတဲ့အဖွဲ့က တင်ထားတာလေးတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တာပါ။
“ကိုဗစ် positive လူနာကို လူနာစောင့်ခွင့် လိုက်ပါ နိုင်ရန် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ”
2. လူနာစောင့်နေချိန် အတွင်း မိမိအား ရောဂါကူးစက် နိုင်သော အန္တရာယ် ရှိကြောင်းသိရှိပြီး မိမိသဘောဆန္ဒ အလျောက် လူနာပြုစု စောင့်ရှောက်လိုကြောင်း သဘော တူညီချက် (Informed risk consent) ပေးရမည်။
3. လူနာအားစောင့်ရှောက်နေစဉ် အတွင်း အနည်းဆုံး Level2PPE (Surgical mask,Face shield,Gown,Gloves) ကို အမြဲ ဝတ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပြီး ထိုလိုအပ်သော အကာအကွယ် ပစ္စည်း များအား လူနာရှင်မှ စိုက်ထုတ် ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအကာအကွယ် ပစ္စည်းများဝတ်ဆင်ခြင်း၊ Social distancing ဖြင့် နေထိုင်ခြင်း၊ လက်ကိုသေချာစွာ ဆေးကြောခြင်း စသည့် ရောဂါ ကာကွယ် ခြင်း နည်းလမ်းများကို စနစ်တကျ လိုက်နာ ရမည် ဖြစ်သည်။
4. လူနာစောင့်များသည် လူနာစောင့် ကြပ်သောကာလ ပြီးဆုံးသည့် အခါ Close contacts of confirmed cases များ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသော နေရာတွင် Quarantine ၂ပတ် နေထိုင်ရမည် ဖြစ်ပြီး Swab test အစစ်ဆေး ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Swab test result – positive ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဆေးကုသ မှုဋ္ဌာန တွင် ကုသမှု ခံယူရန်လိုအပ်ပြီး Swab test result – negative ဖြစ်ပါက Quarantine ကာလ ပြီးဆုံးသော အခါ မိမိ နေအိမ်သို့ ပြန် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ စည်းကမ်းချက်များ ပါဝင်သော သဘောတူညီ ချက် ပုံစံကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ နားလည် သဘောပေါက်ပြီး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးသော လူနာစောင့် များသာ လူနာစောင့်ကြပ်ခွင့် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုဗဈ ပေါ့စတဈ လူနာ ကို လူနာ စောငျ့ခှငျ့ လိုကျပါ နိုငျရနျ သတျမှတျ ထားသော စညျးကမျး ခကျြ မြား (ရှယျထားပေး ပါအုံး ..)
ကြှနျတျော ကို ကိုဗဈ Positive လူနာစောငျ့ လိုကျခငျြတဲ့ ကိစ်စနဲ့ပတျသတျပွီး လာမေးကွတာတှရှေိ ပါတယျ။ အရငျကတော့ လိုကျလို့မရဘူး လို့ပဲ သိထားပငျမဲ့ အခု ကိုဗဈ နဲ့ပတျသတျပွီး ဖွကွေားပေး နတေဲ့ HICA ဆိုတဲ့အဖှဲ့က တငျထားတာလေးတှလေို့ ပွနျလညျမြှဝပေေး လိုကျတာပါ။
2. လူနာစောငျ့နခြေိနျ အတှငျး မိမိအား ရောဂါကူးစကျ နိုငျသော အန်တရာယျ ရှိကွောငျးသိရှိပွီး မိမိသဘောဆန်ဒ အလြောကျ လူနာပွုစု စောငျ့ရှောကျလိုကွောငျး သဘော တူညီခကျြ (Informed risk consent) ပေးရမညျ။
3. လူနာအားစောငျ့ရှောကျနစေဉျ အတှငျး အနညျးဆုံး Level2PPE (Surgical mask,Face shield,Gown,Gloves) ကို အမွဲ ဝတျဆငျထားရနျ လိုအပျပွီး ထိုလိုအပျသော အကာအကှယျ ပစ်စညျး မြားအား လူနာရှငျမှ စိုကျထုတျ ဝယျယူရမညျဖွဈသညျ။ ထိုအကာအကှယျ ပစ်စညျးမြားဝတျဆငျခွငျး၊ Social distancing ဖွငျ့ နထေိုငျခွငျး၊ လကျကိုသခြောစှာ ဆေးကွောခွငျး စသညျ့ ရောဂါ ကာကှယျ ခွငျး နညျးလမျးမြားကို စနဈတကြ လိုကျနာ ရမညျ ဖွဈသညျ။
4. လူနာစောငျ့မြားသညျ လူနာစောငျ့ ကွပျသောကာလ ပွီးဆုံးသညျ့ အခါ Close contacts of confirmed cases မြား လိုကျနာရမညျ့ စညျးကမျးအတိုငျး သတျမှတျထားသော နရောတှငျ Quarantine ၂ပတျ နထေိုငျရမညျ ဖွဈပွီး Swab test အစဈဆေး ခံရမညျ ဖွဈပါသညျ။ Swab test result – positive ဖွဈပါက သကျဆိုငျရာဆေးကုသ မှုဋ်ဌာန တှငျ ကုသမှု ခံယူရနျလိုအပျပွီး Swab test result – negative ဖွဈပါက Quarantine ကာလ ပွီးဆုံးသော အခါ မိမိ နအေိမျသို့ ပွနျ နိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။
အထကျပါ စညျးကမျးခကျြမြား ပါဝငျသော သဘောတူညီ ခကျြ ပုံစံကို ရှငျးလငျးပွောပွ၍ နားလညျ သဘောပေါကျပွီး သဘောတူ လကျမှတျရေးထိုးသော လူနာစောငျ့ မြားသာ လူနာစောငျ့ကွပျခှငျ့ ရမညျ ဖွဈပါသညျ။